Maxaa iska bedelay Mowqifkii Madaxweyne Farmaajo arrinta Jubbaland ? (Warbixin) - Jowhar Somali news Leader
Home News Maxaa iska bedelay Mowqifkii Madaxweyne Farmaajo arrinta Jubbaland ? (Warbixin)
Maxaa iska bedelay Mowqifkii Madaxweyne Farmaajo arrinta Jubbaland ? (Warbixin)
Kaddib Go’aankii lama filaanka ahaa ee Madaxtooyada Villa Somalia ka qaadatay mowqifkeedii hore ee Jubbaland ayaa u muuqda mid albaab cusub u furaya xaalada siyaasadeed ee dalku geli doona xilliga soo socdo.
Inkastoo wixii ka horreeya maanta Madaxtooyada ay gadaal ka taagneyd Arrinta Jubbaland, isla markaana Wasaaradda Arrimaha Gudaha qaabilsaneyd, hadana go’aanka Madaxtooyada ku aqoonsatay Jubbaland waxaa loo arkaa mid culeys lagu muujinayo, oo Madaxtooyada markaan toos xaalada u soo gashay.
Doorashooyinka dowlad goboleedyada waxaa la fal geli jiray oo kor-joogteyn ka aheyd Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Xukuumadda Soomaaliya, dhacdooyin kala duwan oo ka dhacay maamul goboleedyada Jubbaland, Galmudug, Koofur Galbeed iyo Hirshabeelle waxaa safka hore ka ahaa Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo aqoonsi iyo diidmo soo saari jirtay hadba sida ay wax u dhacaan. Sidoo kale Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa soo saari jirtay habraacyada doorashooyinka, halka marka ay arrimuhu cakirmaan gaar ahaan dhanka amniga, ay Wasaaradda Amniga qoraallo soo saari jirtay sida Mukhtaar Roobow xanibaaddiisa.
Dhacdooyinkii u dambeeyay ee Jubbaland, doorashadii muranka dhalisay ee Axmed Madoobe, Xukuumadda, gaar ahaan Wasaaradda Arrimaha Gudaha waxay safka hore kaga jireen diidmada doorashooyinkii Jubbaland, iyadoo war saxaafadeedyo iska soo daba saareysay, illaa ugu dambeyn fadhi ay yeesheen Golaha Wasiirada ku qaadaceen natiijadii doorashooyinkii Jubbaland iyo in aanay aqoonsaneyn Axmed Madoobe.
Maanta waxaa si la ma filaan Madaxtooyada uga soo baxday warqad maamul gonoleedyada Jubbaland lagu aqoonsanayo si ku meel gaar ah laba sannadood. Waxay ku soo aadday xilli bulshada dhegahoodu ay ku sii jeedaan Jabuuti iyo safar madaxda, wadahalada Somaliland iyo khilaafka hareeyay marxaladda kala guurka, iyo cadaadiska beesha caalamka.
Waxay u muuqan kartaa in madaxweynaha oo ka biyo diidsanaa doorka uu qaatay Guddoomiyaha Aqalka Sare Senator Cabdi Xaashi, sidoo kalena ka welwelsanaa jihada uu RW Xasan Cali Kheyre uu ka jiro, uu ka hor dhacay khatarta ku soo food leh hoggaamintiisa marxaladda kala guurka.
Aqoonsiga madaxtinimada Jubbaland ee u muuqda mid aan talo badan la galin, wuxuu muujinayaa:
1- In Madaxweynaha uu u muujiyo beesha caalamka gaar ahaan Mareykanka in uu mowqifkiisa dabcay, fursadna loo siiyo inuu hoggaamiye ka noqdo kala guurka. Waxaa taas muujinaya casuumaddiisa maamulada gaartay maanta ee shirka Amniga Qaranka ee bisha dhammaadkeeda dhici doonna.
2- Wuxuu furayaa muran kale oo sii jiitami doonno maadaama Puntland ay hore u diidday shir amni, xisbiyada iyo maamulada qaarna ay taageereen shirka kala guurka ee Senator Cabdi Xaashi. Ma cadda in Madaxweyne Axmed Madoobe uu oggolaan doonno go’aanka sida ku meel gaarka ah loogu aqoonsaday.
3- Shirkii Golaha Wasiirada ee baaqday Khamiistii hore, shirkii Wakiilka Qaramada Midoobay James Swan uu la yeeshay Agaasimaha NISA Fahad Yaasiin, ka ergayntii madaxweynaha ee uu Guddoomiyaha Golaha Shacabka ugu tagay Madasha Xisbiyada Qaran, iyo safarka uu maanta RW Kheyre ku wehliyay Madaxweyne Farmaajo ee Jabuuti intaba waxay muujinayaan in madaxweynaha uu ka aamin baxay Golaha Wasiirada, madaxtooyaduna ay si toos u soo faragelisay Xukuumadda.
Lama hubo in maamulada iyo saamileyda siyaasadeed inay ka weecan doonnaan taageeradii ay u muujiyeen hoggaanka Cabdi Xaashi ama in uu Farmaajo ku guuleysan doonnk dib u hanashada doorkiisa lumay maalmahaan.